အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဖက် အကျပ်အတည်း ဆိုက်နေ၊ လုပ်သားအခြေပြု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး - Yangon Media Group
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဖက် အကျပ်အတည်း ဆိုက်နေ၊ လုပ်သားအခြေပြု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး
အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျပ်အတည်းဆိုက်နေသဖြင့် အထည်ချုပ်ကဲ့သို့သော လုပ်သားအင်အားအခြေပြုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ဖြိုးရေးကို အစိုးရကူညီပံ့ပိုးရန် အထူးလိုအပ်နေဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ထွန်းနိုင်က ပြောသည်။ ဇန်နဝါရီ ၃ဝ ရက် ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်ချိုချိုတင်သွင်းသည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျင် မြန်ချောမွေ့လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး လုပ်သားအင်အားအခြေပြု သော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ကျယ်ပြန့်လာစေရန် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အ လမ်းများပေါ်လာအောင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို ကိုယ်စားလှယ်များဆွေး နွေးစဉ် ယင်းသို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာကို လက်ရှိတွင် ကျပ် ၃၆ဝဝမှ ကျပ် ၄၈ဝဝ သတ်မှတ်ရန် ပြင်ဆင်မှုများရှိနေပြီး အလုပ်သမားများဘက်မှ လက်ရှိစားသောက်နေထိုင်စရိတ်များ ကြောင့် ထပ်တိုးတောင်းမှုများရှိ နေကာ အလုပ်ရှင်များဘက်မှလည်း အလုပ်သမားလစာ၊ စရိတ်တိုးလာမည်ဖြစ်သဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများရပ်တည်ရန် အင်မတန်ခဲယဉ်းနိုင်သည့် အနေအထားရောက် နေကာ နှစ်ဖက်အကျပ်ဆိုက်နေ ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ထွန်းနိုင်က ”အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျပ်အတည်းဆိုက်နေချိန်မှာ အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိတဲ့ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများက အစွမ်းကုန် ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျင် မြန်ချောမွေ့လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး လုပ်သားအင်အားအခြေပြု သော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံအတွင်း နည်းပညာ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်ကြားနိုင်မှု လွန်စွာအားနည်းနေကြောင်း သိရသည်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် အလယ်တန်းအဆင့် ပြီးမြောက်ပါက နည်းပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာရပ်သင်ကြားနိုင်မှု အပေါ်ကိုလည်း ဦးတင်ထွန်းနိုင်က ”ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကတော့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အင်ဒို နီးရှားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ၈၄ ဆလောက် နည်းနေပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့ဆိုရင်အ ဆ ၇ဝ လောက် နည်းနေပါတယ်။ လာအိုနဲ့ဆိုရင် လေးဆလောက်နည်း နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းပညာ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ ရေးကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက အားထည့်ပြီးဆောင်ရွက် ဖို့လိုပါတယ်” ဟု အကြံပြုပြောသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးဇော်အောင်က နိုင်ငံတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ဆိုးကျိုး သသရာလည်နေကြောင်း၊ လုပ်သားအင်အားအခြေပြုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာရန်လို ကြောင်း ပြောသည်။
”လုပ်သားအင်အားအခြေပြု သော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတိုးတက်လာရင် အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးတက်နိုင်သလို ပြည်တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေ တိုးတက်လာပြီး နည်းပညာတွေလည်း ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေ မဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေနည်းပြီး ဝင်ငွေတွေလည်း နည်းပါးလာပါတယ်။ ဝင်ငွေနည်းတော့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုလည်း နှေးလာပါတယ်။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနည်းတော့ ပြည်တွင်းလုပ်သားတွေ နိုင်ငံခြားသွားလုပ်ရပါတယ်။ ဒီတော့ ဦး နှောက်ယိုစီးမှုတွေဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှာလာပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှား တော့ လုပ်ငန်ရှင်တွေကလည်း ဝင်လာဖို့တွန့်ဆုတ်ပြီး ဆိုးကျိုးသံသရာလည်နေပါတယ်”ဟု ဦးမျိုးဇော် အောင်က ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုင်းခမ်းဦးက ”စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတည်ဆောက်ဖို့ မြေနေရာရရှိရေးကလည်း အထူးအရေး ကြီးပါတယ်။ မြေဈေးတွေ ခေါင်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမှ ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟုဆိုကာ မြေဈေးကွက် ထိန်းညှိပြီး မှန်ကန်သော မြေမူဝါဒချမှတ်ပေးရန်ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်သားအ ခြေပြုသော အထည်ချုပ်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် စက်ရုံပေါင်း ၄၆ဝ ကျော်ရှိပြီး အလုပ်ကိုင်ဖန်တီး ပေးနိုင်မှု လေးသိန်းခွဲခန့်ရှိကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ဆွေးနွေးချက်အရ သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သမ္မတဖြစ်ရန် မျှော်မှန်းချက်ရှိ ၊ ပြည်သူနှင့်အတူ ဆက်လက် ကြိုးပမ်းမည်ဟု ??
သီပေါမြို့နယ် ကုန်းသာကျေးရွာ၌ မိသားစုတစ်စ အိပ်ပျော်နေစဉ် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရ၍ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာ??
ပါကစ္စတန်ရေငုပ် သင်္ဘောက ခရုစ်ဒုံးပျံ စမ်းသပ်ပစ်ခတ်
ကင်ဆာဖြစ်နေသူကို သေဒဏ်မစီရင်ရန် အမေရိကန်ကို ကုလသမဂ္ဂတိုက်တွန်း